कांग्रेस नेताहरुबीच महाधिवेशन केन्द्रित छलफललाई तीव्रता | हिमालयन ट्रिबुन
२०७८ असार १५, मंगलवार १२:२३
HT २०७८ असार १५, मंगलवार १२:२३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसका नेताहरूले भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । यसैक्रममा मंगलबार पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको ‘लञ्ज मिटिङ’ भएको छ ।
कांग्रेसभित्र नयाँ धार निर्माणका लागि प्रयास गरिरहेका उनीहरूबीच महाधिवेशनमा सहकार्य गर्ने र पार्टीलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
यसअघि पनि उनीहरुबीच दुईपटक छलफल भइसकेको छ । यसअघि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण सिटौला र सुजाता कोइरालाबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो । उनीहरुबीच महाधिवेशनमा मिलेर जाने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कहाँ जाने ?
Spread the loveकाठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार नायवमहान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कहाँ जाने ? भनी प्रश्न गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले भने, […]
२०७८ असार ८, मंगलवार १२:१६
२०७८ जेष्ठ १७, सोमबार १७:३२
विश्वका राष्ट्रपतिहरुसँग सहयोग माग्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुन धारामा छ ?
२०७७ माघ २२, बिहीबार १०:१०
जनकपुरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, झडपमा नेकपाका नेता झा घाइते